Tag: ngwa na-ewu ngwa ngwa | Martech Zone
Tag: ngwa mkpanaaka na-ewu ụlọ
Swing2App: The Ultimate No-koodu App Development Platform
Monday, November 16, 2020 Monday, November 16, 2020 Douglas Karr
Enwere ihe akaebe zuru ezu banyere ebe ngwa ngwa eji eji ekwentị. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị, enwere opekata mpe otu ngwa maka ebumnuche ọ bụla. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ndị ọchụnta ego na-asụ ụzọ ka na-enyocha ụzọ ọhụrụ iji banye egwuregwu agagharị. Ajuju ajuju ajuju bu: - Ugboro ole ndi oru ohuru na ndi oru ahia ha nwere ike nye aka uzo mbu nke ngwa ngwa? Ọbụghị naanị na mmepe ngwa ngagharị na-ewepụ ma na-eri oge,
Lumavate: Igwe na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa maka ndị na-ere ahịa
Sunday, June 21, 2020 Sunday, June 21, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnụbeghị okwu ahụ na-aga n'ihu Web App, ọ bụ nkà na ụzụ ị kwesịrị ị bea ntị na ya. Cheedị ụwa nke na-anọdụ n'etiti ebe nrụọrụ weebụ na-ahụkarị na ngwa mkpanaka. Gị ụlọ ọrụ nwere ike chọọ ka a siri ike, Njirimara ọgaranya ngwa nke ahụ bụ ihe na-ekere òkè karịa a website… ma ga-amasị-eleghara mmefu na mgbagwoju anya nke ewu ihe ngwa na-achọ na-etinye site na ngwa na-echekwa. Kedu ihe bụ ngwa ntanetị na-aga n'ihu (PWA)?
Sunday, June 21, 2020 Sunday, June 21, 2020
Ekwentị mkpanaka ngwa na ekwentị mkpanaka nyiwe maka azụmahịa gị
Satọdee, Nọvemba 25, 2017 Sunday, November 26, 2017 Adam Obere
Ọ na-atụkarị m anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị a na-anaghị ahụ anya na ekwentị mkpanaaka - gụnyere ndị nkwusa buru oke ibu. Nchọpụta Google egosila na 50% nke ndị mmadụ ga-ahapụ weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ọ bụghị mobile-friendly. Ọ bụghị naanị ohere ịnweta ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ, ịhazi saịtị gị maka iji ekwentị nwere ike ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ gị ebe ị maara na ndị folks dị ugbu a! Na nnukwu iche iche nke
ShoutEm: Ngwa ngwa ọdịnala na ngwa ọdịnala Whitelabeled
Monday, July 8, 2013 Monday, July 8, 2013 Douglas Karr
ShoutEm na-enye ngwa ngwa ngwa mkpanaka nke nwere ọtụtụ nhọrọ maka azụmahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ngwa ShoutEm na-enye njikwa ọdịnaya, ama na ndị mbadamba mbadamba mbadamba, ngwa ọrụ ndị ọrụ, nhọrọ nchịkọta ego na usoro mbipụta na-enweghị isi. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike iwuli ngwa ngwa ngwa ngwa dị elu na obere ọnụọgụ ego nke mmepe mmepe yana ngwugwu akara ọcha ShoutEm. Ihe nchọta Adobe na eMarketer na-ekpughe na ndị na-azụ ahịa n'onlinentanet na-enye uru nke mbadamba nkume n'elu smartphones mgbe ha na-azụ ihe n'ịntanetị.
Monday, July 8, 2013 Monday, July 8, 2013
Chepụta Ngwa Ngwa Ngwa Maka iPhone na gam akporo na Nzọụkwụ 5
Tọzdee, Eprel 25, 2013 Tuesday, January 12, 2021 Douglas Karr
My Mobile Fans na-enye ọnụ mobile ngwa ọdịnala na mobile weebụsaịtị maka onye, ​​na-abụghị uru na obere azụmahịa gburugburu ebe obibi site na ha ụlọ ọrụ na-eduga Do-Ọ-Onwe Gị (Mee N'onwe Gị) ngwa na-ewu ụlọ. N'ihe karịrị ihe ọgaranya 40 maka ịkwalite ekwentị, ọnọdụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ha nwere ike ịbụ usoro ikpo okwu ngwa ngwa kachasị ọnụ ma sie ike na ahịa. The ngwa bụ nnọọ mfe, na-enye a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ wizard sere gị site mwube gị mobile ngwa. Kwụpụ 1: Họrọ nke gị